Man City Oo Ka Taqalustay FC Porto, Qeybtii Labaad Ayay Natiijada Ku Rogeen – Kooxda.com
HomeChampions LeagueMan City Oo Ka Taqalustay FC Porto, Qeybtii Labaad Ayay Natiijada Ku Rogeen
October 21, 2020 Osman Fantastic Champions League, Wararka Maanta Comments Off on Man City Oo Ka Taqalustay FC Porto, Qeybtii Labaad Ayay Natiijada Ku Rogeen
Sheekada ciyaarta : City iyo FC Porto ayaa nasiinada ku aaday bar bar dhac min hal gool ah xilli City goolka looga naxsaday waqti hore
Ciyaarta ayaa aheyd mid labada dhinac u furan inkastoo City ay ku badneyd kubadda waxaana goolka lagu helay daqiiqaddii 14-aad halka kooda heleen daqiiqaddii 20-aad waxa uuna ahaa gool rikoore uu ku dhaliyay Aguero .
Labada goolhaye ayaa door weyn ku lahaa natiijadaas xilli City ay ku adkeyd in ay xal u helaan maadaama FC Porto daafac ahaan ay ahaayeen ku adag .
Qeybta labaad Man City waa ay ku badnaayeen kubadda waliba goolhayaha FC Porto ayaa hor taagnaa halka dhankooda ay halis ugu jireen in gool looga dhaliyo qaladaad uu sameeynayaya Walker .
Heerka kubad haysashada Man City wax aay gaareysay mararka qaar %71 balse gool ayaa ka maqnaa xilli Mehraz uu ahaa ninka ay ka go`an tahay in uu shabaqa soo taabto .
FC Porto waxa ay ku tiirsanaayeen kubadaha rogaal celiska ah xilli farsamo ahaan ay wacnaayeen waxa ayna City u diideen in afka hore si fog u soo gaaraan .
Dadaalii City , waxaa ku yimid gool waxaana Free Kick qurxoon ugu dhaliyay Ilkay Guendogan daqiiqaddii 65-aad , waxa uuna Pep ka dib badalay Ilkay Guendogan isaga oo soo giliyay Foden halka Aguero isna la badalay waxaana la soo giliyay Ferran Torres waxa ayna arintaas dhacday daqiiqadii 68-aad
Ka dib goolkaas , City cadaadis ayay saareen FC Porto waa ayna u dhawaaanayeen gool illaa ay keeneen mid sedexaad daqiiqadii 73-aad waxaana dhaliyay Ferran Torres oo badal ku soo galay kulankaas .
City fursado muhiim ah ayaa soo maray birta iyo goolhayaha FC Porto ayaa diiday , waxa ayna ciyaarta noqotay mid hal dhinac , waxa aya City daqiiqadii 85-aad soo giliyeen Fernandinho oo loo saaray, si waliba oo ay City u dadaaleen waxa ay ciyaarta ku dhamaatay 3/1 oo ay City guusha ku raacday .